Ovaltine Myanmar to organize “Warm Family Bonding” Thadingyut campaign with grandeur – LYCA COMMUNICATIONS
Ovaltine Myanmar to organize “Warm Family Bonding” Thadingyut campaign with grandeur
Date: October 1, 2019Author: Rahul0Comments
Yangon – October 1, 2019 – Ovaltine in Myanmar has taken the initiative activity to build the culture of “Warm Family Bonding” in the suspicious family occasion of Thadingyut with grandeur as it is done every year.
This year Ovaltine connect with million of people in Myanmar with the message of giving back to their home, for family reunion and give them “Happy Surprise” to make their moment memorable in this Thadingyut.
Thadingyut isavery special moment for Myanmar people, as it give the opportunity to pay respect and gift to their respectable person like parents/grandparents and elders and make them happy. Ovaltine takes this opportunity to launch “Happy Surprise” campaign in Myanmar by Mr. Sudeep Chatterjee, Marketing Head of Ovaltine Myanmar team.
Ovaltine isabrand, which isasymbol of love and caring for Myanmar families. Ovaltine engage with Myanmar leading actress THET MON MYINT and her family to highlight the theme message and culture of giving Happy Surprise to random Myanmar family homes.
“Along with this campaign, we planned to connect with Myanmar families (including different age groups of family members) and giving message of “we are sharing exiting wonderful moment with Myanmar families within this kind of traditional festival and aiming for supporting healthy and happy families. The initiative connects multiple segments in society and family like adults, kids, retailers and elderly people who need to be connected with this message so that ultimately, we buildaHappy and Healthy society keeping our roots of tradition ingrained in our life,” said Mr. Sudeep Chatterjee.
To the buildup of Thadingyut, Ovaltine visit along with Thet Mon Myint in making real surprise visit to homes every week. Asasudden visit and spreading the message of “Happy Surprise”, which will bring positive vibes among the people in Myanmar. She will continue coming to homes till Thadingut asasudden surprise.
Along with it Ovaltine has been revivingacontest of “Happy Lantern Creation Competition” in schools in Myanmar. Decorated with beautiful lanterns during Thadingyut festival isatradition of Myanmar. We are aiming Myanmar future kids to keep connected with Myanmar tradition and hand over the most precious tradition of Myanmar to future generation. In other hand, encourage children’s competitive mindset and giving opportunity for them to show their ability and creative mind to public. More than 150000 participants divided into three main groups (grade1~3, grade4~6 and grade 7~9) participated in this Happy Lantern Creation Contest to win three cash price (2 lakh, 1 lakh and 50k ) per age group in major city of the country.
Apart from these activities, there are plenty of other exiting activities will be bring by Ovaltine and Happy Surprising to Myanmar families from every corner of society and country. Like, at the time of buying Ovaltine, you can be surprising awardedagift price from Ovaltine.
The lucky one can be anyone and everywhere within country. Similarly in the Bus stations of someone in the Yangon Aung Mingalar highway , Dagon Ayar Station, Kywe sel kan station in Mandal;ay, from October7to 9, there will be lots of happy surprise moment with gifting , food carnival to keep the momentum of happiness spreading festival.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းမှုကို ဖော်ဆောင်သည့်သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အထူးအစီအစဉ်များကို အိုဗာတင်းမြန်မာမှခမ်းနားကြီးကျယ်စွာကျင်းပမည်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် – မြန်မာနိုင်ငံရှိ အိုဗာတင်းအနေဖြင့် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် သီတင်းကျွတ်အခါသမယတွင် “ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိသားစုပြန်လည်စုံစည်းမှု” ကိုဖော်ဆောင်သည့် ချစ်စဖွယ် အလေ့အထတစ်ခုကို နှစ်စဉ်ဖော်ဆောင်လာခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင်လည်း ယခင်နှစ်များနည်းတူ ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် အိုဗာတင်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိသန်းပေါင်းများစွာသော စားသုံးသူများ၏ မိသားစုအား ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းနှင့် မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်းဆိုသည့် အသိပေးမှုဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သီတင်းကျွတ်ကာလအတွင်း မိသားစုနှင့် အမှတ်တရအချိန်လေးများ အတူဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် “အံ့အားသင့်ပျော်ရွှင်စေမည့် လက်ဆောင်များ” လည်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကာလသည် မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ထူးခြားသည့် အခါသမယတစ်ခုဖြစ်ရာ ပွဲတော် ကာလတွင် လူငယ်များမှ ၎င်းတို့ ရိုသေလေးစားရသော လူကြီးမိဘများ၊ အဘိုးအဘွားများ၊ ဆရာသမားများ အားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများဖြင့် ရှိခိုးကန်တော့ပြီး လူကြီးမိဘများအနေဖြင့်လည်း လူငယ်များ၏ သိတတ်မှု အပေါ် ပီတိဖြစ်ပျော်ရွှင်ရသည့် အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ovaltine Myanmar မှ Marketing Head ဖြစ်သူ Mr Sudeep Chatterjee က “အိုဗာတင်းအနေနဲ့ ဒီလိုထူးခြားတဲ့အချိန်ကာလမှာ “အံ့အားသင့်ပျော်ရွှင်စရာ” campaign တွေကိုစတင်လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
အိုဗာတင်းသည် မြန်မာမိသားစုများအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဂရုစိုက်ခြင်းကို ဖော်ကျုးသည့် အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုဗာတင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် သက်မွန်မြင့်နှင့် သူမ၏မိသားစုမှ အိုဗာတင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် မြန်မာမိသားစုများဆီသို့ “Happy Surprise” အနေနှင့်ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။
“အခုဒီ campaign နဲ့အတူမြန်မာမိသားစုတွေ (အသက်အရွယ်မရွေးပါဝင်သောမိသားစုဝင်များ)နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး “ကျွနု်ပ်တို့အနေနဲ့ ဒီရိုးရာပွဲတော်ရဲ့ ထူးခြားလှပတဲ့ အချိန်ကာလကို မြန်မာမိသားစု တွေနဲ့ အတူမျှဝေခံစား သလို ပိုမိုကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်စေဖို့အတွက် ပံ့ပိုးပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်” ဆိုတဲ့ အမှာစကားကို မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကနေ ဒီအမှာစကားနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ကဏ္ဍစုံက လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ အရွယ်ရောက်သူတွေ၊ ကလေးတွေ၊ လက်လီရောင်းချသူတွေ၊ လူကြီးသူမတွေနဲ့ ဆက်သွယ်သွားမှာမို့ အဆုံးမှာ ကျွနု်ပ်တို့ဘဝမှာ အမြစ်တွယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းပြီးဖြစ်သလို ကျန်းမာပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကိုလဲ တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သွားမှာပါ”ဟု Mr Sudeep Chatterjee ကဆက်ပြောသည်။
သီတင်းကျွတ်ကာလကို ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှ အိုဗာတင်းအနေဖြင့် သက်မွန်မြင့်နှင့်အတူ အိမ်များဆီသို့ အပတ်စဉ် ရုတ်တရက်အလည်အပတ်သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ရုတ်တရက်တွေ့ဆုံရာတွင် “Happy Surprise” အမှာစကားမျှဝေမှုမှတဆင့် မြန်မာပြည်သူများအကြား ကောင်းမွန်သည့်ခံစားမှုများယူဆောင်ပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်သည့်အထိ အိမ်များဆီသို့ ရုတ်တရက် အလည်အပတ်အဖြစ် သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။။
အထက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်များအပြင် အိုဗာတင်းအနေနှင့် “ပျော်ရွှင်စရာ သီတင်းကျွတ်မီးပုံးဖန်တီးမှုပြိုင်ပွဲ”ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းများတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ သီတင်းကျွတ်ကာလတွင် လှပသောမီးပုံးများဖြင့် အလှဆင်ခြင်းမှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အလေ့အထတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်ကလေးငယ်များအနေဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်စေရန်နှင့် တန်ဖိုး ကြီးမားသည့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေကို အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များဆီသို့ လက်ဆင့်ကမ်းပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားတဖက်တွင်လည်း ကလေးသူငယ်များ၏ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်ကို အားပေးပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်နှင့်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားကိုလည်း အများပြည်သူသို့ ချပြခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်များကို (grade1~3, grade 4~6 နှင့် grade 7~9) စသဖြင့် သုံးဖွဲ့ခွဲပြီး ယှဉ်ပြိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ မြို့ကြီးများရှိ ပျော်ရွှင်စရာမီးပုံးဖန်တီးမှုပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသူများကို အသက်အရွယ်အလိုက် ဆုငွေကျပ် (၂ သိန်း၊ ၁သိန်း၊ ၅သောင်း) စသည်ဖြင့် အသီးသီးပေးအပ် ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်များအပြင် အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအစီအစဉ်များကို အိုဗာတင်းနှင့် Happy Surprising မှ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ မိသားစုများဆီသို့ ယူဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အိုဗာတင်းဝယ်ယူနေချိန်တွင် အိုဗာတင်း၏ အမှတ်တရလက်ဆောင်ကို အံ့အားသင့်စွာ လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ရှိ မည်သည့်ဝယ်ယူသူမဆို အဆိုပါကံထူးရှင်ဖြစ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အလားတူပင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အောင်မင်္ဂလာ၊ ဒဂုံဧရာ အဝေးပြေးကားဂိတ်များနှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ ကျွဲဆည်ကန် ကားဂိတ်တို့တွင် အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်နေ့ မှ (၉)ရက်နေ့ အထိ ပျော်ရွှင်စေမည့် လက်ဆောင်များ အမှတ်မထင် ပေးအပ်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်မှုများကို မျှဝေပေးသည့်ပွဲတော်၏ အငွေ့အသက် ပိုမိုထင်ဟပ် စေရန်အတွက် အစားအသောက်ပွဲတော်များလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ အဝေးပြေးကားဂိတ်တို့တွင် အိုဗာတင်း ထုတ်ကုန်များအား ရောင်းချပေးခြင်း၊ surprise လက်ဆောင်များပေးခြင်းနှင့် sampling တိုက်ကျွေးခြင်းများကို အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့ မှ (၁၁)ရက်အထိ နှစ်ရက်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Ovaltine ကို ၁၉ ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်များ အာဟာရချို့တဲ့မှု တိုက်ဖျက်ရန် ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် Ovaltine ထုတ်လုပ်သည့် နည်း စနစ်များ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး Ovaltine ကို နေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် သောက်သုံးသူများအတွက် ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အသားဓာတ်၊ ကစီဓာတ်၊ အဆီဓာတ်တို့နှင့်အတူ ခန္ဓကိုယ် အတွက် လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် (၂၄) မျိုးတို့ ပါဝင်သောကြောင့် ပြီးပြည့်စုံသော အာဟာရကို ရရှိစေပါသည်။ Ovaltine ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် Ovaltine Malted Milk နှင့် Ovaltine Malted Choco ဟူ၍ အရသာနှစ်မျိုး ရရှိနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Ovaltine ကို AB Food & Beverages (Thailand) Ltd. မှ ထုတ်လုပ်ပြီး ၎င်း၏ အကျိုးတူစီးပွား မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသော DKSH (Myanmar) Ltd နှင့် Mega Life Sciences Myanmar တို့က ဖြန့်ချိ ပါသည်။ Ovaltine Myanmar ၏ အကြောင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Ovaltine Myanmar ၏ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သော http://www.facebook.com/OvaltineMMတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
FamilyLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyNutritionOvaltineOvaltine MyanmarPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaThadingyut FestivalYangon
Previous Previous post: Sweety Home Company launches free to download Viber sticker pack to mark Thadingyut festival of Myanmar
Next Next post: Ovaltine Myanmar successfully organized its “Warm Family Bonding” Thadingyut Campaign with grandeur